किन परिवर्तन गर्ने ‘इञ्जिन आयल’ ? | गृहपृष्ठ
Home यातायात किन परिवर्तन गर्ने ‘इञ्जिन आयल’ ?
यातायात3views
लामो समय सञ्चालनपछि स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुने तापका कारण इञ्जिन आयलको क्षमतामा ह्रास आउँछ । यसो हुँदा ल्युब्रिकेण्टका रूपमा यो कम प्रभावकारी हुन्छ । राम्रो ल्युब्रिकेण्टको अभावमा इञ्जिनका पार्टपुर्जाबीच तीव्र घर्षण हुन्छ । यसले गर्दा समय–अन्तरालमा तिनीहरू खिइँदै जान्छन् । आयलमा रहेका अन्य रसायनले तेजावलाई निष्क्रिय पार्ने काम पनि गर्छ । तर, विस्तारै यसको कार्यक्षमता घट्दै गएर कार्य गर्न छाड्छ ।
आयलले पानी, धूलोका कण, ताप र चापका कारण उत्पन्न हुने अतिरिक्त फोहोर सोसेर इञ्जिनमा तिनको असर निष्क्रिय पार्न सघाउँछ । सवारीसाधन चलाउँदै जाँदा फोहोर पदार्थ आयलमा मिसिने हुँदा यसको सोस्ने शक्तिमा ह्रास आउँछ र विस्तारै यो खियाको कारण पनि बन्छ ।
आयल परिवर्तन नगरे के हुन्छ ?
छोटो समयमा खासै असर नगरे तापनि समय–अन्तरालमा इञ्जिन, क्र्याङ्क केश, क्यामसाफ्ट, भल्भलगायतमा यो जम्न थाल्छ । यसको समयमै हेरचाह नगरिए इञ्जिन सफा गर्न धेरै पैसा खर्चनुपर्ने हुन्छ । साथै, पिष्टन रिङमा खराबी आएमा यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । यसो गर्नुपर्दा आयल परिवर्तन गर्नुको तुलनामा अधिक खर्च बढ्छ । त्यसैले, समय–समयमा इञ्जिन आयल परिवर्तन गर्नाले इञ्जिनको अवस्था सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ ।